Ụlọakụ mbaụwa agaghi ebinye steeti ọzọ ego -El-Rufai - BBC News Ìgbò
Ụlọakụ mbaụwa agaghi ebinye steeti ọzọ ego -El-Rufai
17 Eprel 2018
Image copyright Nasir el-Rufai/Facebook
Nkenke aha onyonyo Nasir el-Rufai rụbụrụ ọrụ ka Minista ha ahụ maka Abuja
Aka na-achị Kaduna steeti bụ Nasir El-Rufai ekwuola na ndị ụlọakụ nke mbaụwa nke a na-akpọ "World Bank" na Bekee agaghị ebinye steetị ọbụla na Naịjirịa ego ha chọrọ ibite ma nke Kaduna Steeti esoghị ya.
Kaduna Steeti so na steeti ndị rịọrọ World Bank arịrịọ ka ha binye ha ego ha ga eji rụọ ọrụ mmepe obodo, mana ụlọikpe ukwu kagbụrụ nke Kaduna ma gaa n'ihu kweta ka nke ndị ọzọ ga n'ihu.
Ka Nasir el-Rufai na emepe nzụkọ ndị ọkaipe na Steetị ya, bụ nke mere na Barnawa, bu obodo dị na isi obodo steeti ahụ, o kwuru na ọ bụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị ka e jiri kagbuo ego ụlọakụ mbaụwa chọrọ ibinye steeti ya.
Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ bụ Kaduna kachasịri tozuo n'usoro eji enye ego n'ụlọakụ mbaụwa.
"Ndị ụlọakụ mbaụwa agaghị ebụnye steeti ọbụla ego ma ya bụrụ na Kaduna esoghị... ndị ụlọakụ mbaụwa nwere iwu ji ha. Kedụ etu anyị ga-esi gbachie ego steeti tozuru ma sị ka nke ndị ọzọ ga n'ihu? Ọ bụ nsogbu a di n'ihu ụlọakụ mbaụwa," El-Rufai kwuru.
BBC Igbo ezigala ụlọakụ mbaụwa ozi ka anyị nụ n'ọnụ ha mana ha asabeghi anyị ruo mgbe anyi dere akụkọ a.
Ejima atọ nna ha 'gbara ọsọ'
Ọchị ehi chọrọ ịnapụ anyị ala anyị - Abaribe
Ikpe ikpe gawa godu - ọkaiwu
'O nweghị ebe yiri ụlọ'
Zinedine Zidane na mmadụ atọ ndị a e nwere ike ịnọchi Jose Mourinho?
International Organization for Migration: Ndị jepụrụ n'ala Naijiria sị na uru adịghị ya